Intel PUBG Hack 🥇 Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Intel PUBG mbanye anataghị ikike
Intel PUBG Hack si GamePron zuru oke maka ndị na-agba ọsọ igwe Intel ma chọọ ntakịrị "enyemaka" na nka PUBG ha.
Nweta ntakịrị uto na ịdị ukwuu na PUBG ma nweta PUBG Intel Hack maka ụbọchị 1!
Na-achọ ntakịrị karịa naanị uto nke ịdị ukwuu? Nweta ohere 1-izu anyị PUBG Intel Cheat!
Fọdụ ndị ọrụ nọ na ya maka ogologo oge, ọ bụ ya mere anyị ji enye 1-Month Access na PUBG Intel Hack!
Iji ngwaọrụ iji merie ndị na-emegide gị adịbeghị mfe. Naanị ịzụta igodo ngwaahịa, budata PUBG Cheat, wee wụnye ya na kọmputa gị. GamePron dị mfe!
PUBG Intel mbanye anataghị ikike Ozi
Anyị PUBG Intel Hack akwadoro Windows 10 ma adabara Intel naanị CPU. Ezie na ndị a Ndị aghụghọ na-HWID ekpochi, ọ bụ maka ezi ihe kpatara - anyị na-enye ihe HWID unlock kpọghee ekwt nhọrọ ebe a na Intel dị ka ihe ọzọ ọrụ maka ndị kasị mkpa ya. N'iji atụmatụ ndị ọzọ karịa ka ị ga-atụ anya ịhụ na PUBG Hack, Gamepron abụrụla onye kachasị enye PUBG Ndị aghụghọ n'ịntanetị. Mgbe ị chọrọ ịtụgharị onwe gị na igwe na - enweghị mmeri, ụzọ kachasị mfe iji mee nke a ga - abụ site na itinye PUBG Intel Cheat.
Enwere ọtụtụ atụmatụ ịtụle na PUBG intel Hack ebe a na Gamepron, dị ka ọrụ Visual na Aimbot. You nwere ike iji amasị ndị iro ESP (Ọkpụkpụ, Health, Nzipụta ndenye ego,…) chọta pụrụ iyi egwu na-egwuregwu, nakwa dị ka onye iro Info ọrụ ịhụ ụdị udi ha na na.
Iro ESP (Ọkpụkpụ, Otu / elele enyi na enyi)
Ama iro (Health, Anya)
Ebe nchekwa ma ọ bụ òké aimbot
Aim Bone nhọrọ
Otutu aimbot igodo
Hazie Kick, Naghachi
RCS (Usoro nkwụghachi azụ)
Banyere PUBG Intel
Nke a cheat bụ nnọọ mfe iji, na na ihe mere beginners na lagoro ezumike nka myiri na-anabata ebe a na Gamepron. Anyị nwere atụmatụ dị mkpa maka oge hacker iji rite uru site na hacks anyị, mana anyị na-edebe ihe dị mfe maka onye ọ bụla iji aka ya na-adị mfe. Ndị aghụghọ bụ iyi-àmà na-ezo, zoro ezo niile ndekọ software dị ka OBS. Nwere ike igwu PUBG na mkpebi zuru oke mgbe ị na-eji PUBG Intel Cheat, ebe ị nwere ike gbanyụọ nchedo aghụghọ gị maka ngwa ọrụ iji rụọ ọrụ zuru oke, ngwaọrụ anyị niile dị mma 100%
Kedu ihe kpatara iji PUBG Intel karịa ndị ọrụ ndị ọzọ?
Gamepron ga-ekwe nkwa ogo ngwaọrụ anyị na ntọhapụ ọ bụla, ebe anyị agaghị anwa anwa wepụta ngwaahịa na-anaghị agbaso ụkpụrụ anyị. Anyị agbanweela ụzọ ndị mmepe mbanye anataghị ikike hapụ ngwaọrụ ha niile ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-agbaso nzọụkwụ anyị ma lekwasị anya na mma karịa ọtụtụ. Anyị nwere nnukwu ngwaọrụ iji họrọ ebe a na Gamepron, mana anyị nwere ike ịnye ha na-enweghị ịchụ àjà dị mma.
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere hacking ịbụ “oke” maka gị igbochi, chee echiche ọzọ! Anyị chọrọ ijide n'aka na ndị ọrụ niile nabatara ebe a na Gamepron.
Inwe menu gị gharịrị ma mebie ahụmịhe egwuregwu gị, nke bụ ihe anyị na-ezere ebe a na Gamepron. Ọtụtụ ndị egwuregwu na-egwu egwu maka oge izizi, nke anyị nwere ike ịghọta kpamkpam. Anyị enwetala azụ gị, nke ahụ pụtara na anyị ga-edobe usoro ntinye ahụ oge ọ bụla enwere ike - ịkwesighi itinye aka na ihe ọ bụla ma ị gaghị echegbu onwe gị maka ịtọlite ​​ihe niile n'ụzọ zuru oke tupu enyere ngwa ọrụ . Ọ bụ ezie na ndị otu gị nọ na-agba ọsọ na mbibi a na-apụghị izere ezere, ị ga-arụsi ọrụ ike ịhazi mwakpo ọzọ ma gbalịa ịchọpụta ndị kachasị emetụta!
Nke a cheat dị mfe ma dị mfe iji. Gbaa mbanye anataghị ikike> Gbaa egwuregwu ahụ> Hazie ntọala gị> Gwuo.
Eeh, inwere ike igbanye n’akuku aghụghọ a gaghi ahu ya anya ka ndi n’ile ha.
Nke a aghụghọ bụ esịtidem.
Ọ dị ezigbo mkpa inwe nchedo nkwarụ ọkachasị nchekwa buut na BIOS iji nwee ike iji aghụghọ a ka ịghara inwe nkwarụ ga-emesị nye Error na mmalite.
Ee, a cheat gụnyere hwid spoofer maka ndị ọrụ amachiri hwid.
A6. Ee, ị nwere ike igwu na ihuenyo zuru oke ma ọ bụ ọnọdụ mkpebi ọ bụla ọzọ.
Ndị egwu ọ bụla nwere ọkwa ga - erite uru n'iji ngwa ọrụ a, dịka PUBG nwere ike ịgbaghara - ị gaghị emehie ọzọ n'ọnọdụ dị oke mkpa site na Intel PUBG Hack!
Bụrụ onye PUBG King (ma ọ bụ Queen!) Na-eji akara ndị agha anyị.
Njikere Na-achị na PUBG Intel mbanye anataghị ikike?